a) This INVESTOR AGREEMENT is to be understood as the Agreement between the Investor and lendmo-myanmar.com (the Platform for the Borrower's needs to the Investor). Lendmo is used when the Investor uses the services of lendmo-myanmar.com
b) The Investor should read carefully and agree to all provisions of this Agreement prior to using Lendmo. If you do not agree with any of the regulations, the Investor should not use Lendmo. Having used lendmo-myanmar.com (registered asalender on lendmo-myanmar.com website or Lendmo Myanmar fanpage or app, wapp) means that the investor has completely volunteered to agree to all regulations. in this Agreement.
c) This Agreement includes five (5) Articles. The headings and subheadings of this Agreement are for reference only and do not limit the scope of each section.
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများမှ အကြောင်းအရာ ပြောင်းလဲခြင်းအား သဘောမတူညီပါက Lendmo ၏ဝန်ဆောင်မူများအား သတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီ Lendmo သို့အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။အကြောင်းကြားမှု မရှိပါက ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ လက်ခံသည်ဟု ယူဆမည်။
ငွေချေးသူနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတို့သည် အနည်းငယ်သော ငွေကြေးပမာဏ ကို အချိန်တိုအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးသော လျင်မြန်သော ဝန်ဆောင်မှု့ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ l
Lendmo သည် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူကို အခြေခံ၍ ငွေချေးငှားသူ၏ ကိန်းဂဏန်း ညွှန်းဆိုမှု့ကို ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ရန် တွက်ချက်ပေးသည်။
c) The loan currency is denominated in MMK.
a) Through lendmo-myanmar.com, the borrower is the INVESTOR who will decide the borrowers who wish to borrowacertain amount from 35,000 - 700,000 MMK as shown.
ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသည် ချေးငွေအတိုးနှုန်းအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
a ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူမှ ချေးငှားသူ မြီးရှင် များကို Lendmo မှ ချေးငှားသူ၏ တောင်းဆိုးမှု့အပေါ် မူတည်၍ ချေးငွေအား တွက်ချက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
1. Each loan worth 35,000 - 700,000 MMK. Loans during the period from 10 to 30 days.
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် တစ်လလျှင် ၁.၅ရာခိုင်နှုန်း ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အတိုးနှုန်နှင့် ချေးငွေ အခကြေးသည် အချိန်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ Lendmo သည် ပြောင်းလဲသည့်အခါ ၅ရက်အတိုင်မီ ကြေညာပေးမည်ဖြစ်သည်။
ချေးငှားသူ၏ ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ငွေလွှဲပြောင်းပြီးနောက်ရက်မှ စ၍ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူသည် အတိုးနှုန်းစတင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Lendmo သည် ချေးငှားသူ၏ မှတ်တမ်းများကို စီမံ၍ ပြန်လည်ပေးချေရမည့်ရက်များကို သတိပေးအကြောင်းကြားမည်။Lendmoသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူထံ အကျိုးမြတ်အား ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရင်းနှီးသူထံ အတိုးနှုန်းထုတ်ဖော်၍ ရှင်းလင်းပေးအပ်မည်။
Principal ပါအတိုင်း အတိုးအား ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။
မချေးငှားမီ ရင်းနှီးသူမှ သတင်းအချက်အလက် တိကျရမည်။ချေးငွေဘဏ်အကောင့်သို့ အောင်မြင်စွာ လွှဲပြောင်းပြီးသည့် နောက်ရက်မှ စ၍ ချေးငွေပေါ်တွင် အတိုးနှုန်းကို စတင် တွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ငွေကြေးအား မည်သည့် အချိန်တွင် မဆို ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပိုက်ဆံအား သိမ်းဆည်းစရာ မလိုအပ်ပေ။ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ငွေကြေးအား မည်သည့် အချိန်တွင် မဆို ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ချေးငှားသူဘက်မှ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ
Lendmo ၏ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူ မဖြစ်လာမီ သဘောတူညီမှု့အားလုံးကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ရှု့နားလည်ရမည်။
Lendmo ၏ သဘောတူညီမှု့ ဆိုင်ရာများကို လိုက်နာပြီး မူပိုင်ခွင့် အား လေးစားရမည်။
Lendmo အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ငွေကြေးများလုံခြုံ စိတ်ချခြင်းအတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသည် တာဝန်ယူရမည်။ အသုံးပြုသူမှ သတင်းအချက်အလက်များအား လျှို့ဝှက်ထားရမည်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု့များကို ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းရမည်။ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မပြုရ။ သို့မှသာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အန္တရယ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Article5: အငြင်းပွားခြင်း
ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူနှင့် Lendmo ကြား တစုံတရာ အငြင်းပွားဖွယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက customer support center သို့ဆက်သွယ်၍ အောက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
a) Call to the phone number: 09750126158
b) Email to: support-myanmar@lendmo.org
ဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အချိန်မီ ဖြေရှင်းခြင်း ။
အလုပ်ချိန် နံနက် ၈း၃၀ မှ ညနေ ၆း၀၀ ထိ အလုပ်ချိန်ဖြစ်ပြီး သီတင်းပတ်နှင့် အားလပ်ရက်များ သည် အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်ပါသည်။
INVESTORS agree that all disputes are between CONTRACTORS and lendmo-myanmar.com is resolved in accordance with this agreement or under the law of the State of Myanmar.